‘महिलाले जित्दैनन् भन्ने भ्रम चिरिएको छ’ |
‘महिलाले जित्दैनन् भन्ने भ्रम चिरिएको छ’
प्रकाशित मिति :2017-07-04 12:29:20
स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनमा डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको मेयरमा एमालेकी मन्जु मलासी विजयी हुनुभएको छ । उहाँ नेपाली काँग्रेसका बाजीसिंह खड्कासँग कडा प्रतिस्पर्धाका साथ विजयी हुनुभएको हो । मलासीले ४ हजार ४ सय १८ मत ल्याउनुभएको थियो भने उहाँका प्रतिद्वन्द्वी खड्काले ४ हजार एकसय ५२ मत ल्याउनुभएको थियो । ४८ वर्षिय मलासी २०४६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आउनुभएको छ । उहाँ २०५६ सालको स्थानीय निर्वाचनमा समेत वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो समय उहाँ एमालेको जिल्ला उपसचिवको रुपमा काम गर्दै आउनुभएको थियो । स्थानीय तह दोस्रो निर्वाचबाट निर्वाचित एक्लो महिला मेयर मलासीसँग महिला खबरका लागि सन्दिप विकले गरेको कुराकानी:
मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको छ, कस्तो लागेको छ ?
– खुसी छु । जनताले जे चोहेका थिए, त्यो फैसला भएको छ । मैले निर्वाचन जित्छु भन्ने पूरा विश्वास थियो । मैले जे सोच बनाएको थिएँ त्यो नगरबासीहरुले पूरा गरेका छन् । अब नगरबासीको सेवा गर्ने अवसर मिलेको छ ।
तपाईको प्रतिस्पर्धी पुरुष हुनुहुन्थ्यो । यो जित कतिको सजिलो भयो ?
– चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दा चुनौती त आउँछ नै । महिलाहरुसँग पैसा छैन । जनताले विश्वास गर्दैनन् । टिकट दिए हार्छन् कि भन्ने आशंका थियो । त्यो पितृसत्तादेखिको सोच, भ्रम चिरिएको छ । गाउँ गाउँमा चुनाव प्रचार प्रसारमा जाँदा महिलाले पुरुषसँग के लड्न सक्छन् भन्ने पनि थिए । महिलाहरु पनि प्रमुख पद जित्न सक्छन् । उनीहरु कमजोर छैनन् । हरेक तहमा महिलाहरु सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
तपाईलाई प्रमुख पदको लागि टिकट पाउन कत्तिको गाह्रो भयो ?
– मलाई खासै गाह्रो भएन् । किनकी, मलाई पार्टीका कार्यकर्ताको साथ थियो । मेरो नगरबासी दाजुभाई दिदिबहिनीको साथ थियो । जब टिकट पाएँ । मेरा शुभचिन्तक सबै प्रचारप्रसारमा लागे । पार्टी भित्र अन्र्तघात पनि भोग्नु परेन ।
– पाँच वर्षको कार्यकालमा नमुना नगरपालिका बनाउने योजना छ । जनताको घरदैलोमा गएर काम गर्नेछु । जनताको दु:ख पिडामा आफैँ गएर समाधान गर्नेछु । जसरी जनताले भोट दिएर मलाई जिताउनुभयो । त्यसरी नै उहाँहरुको सम्मान गरेर समृद्ध नगरपालिका बनाउन जोड दिनेछु । यो नगरपालिका आफैँमा पछाडि परेको नगरपालिका हो । नगरको विकासमा लाग्नेछु ।
नगरपालिकामा अहिले सडक छैन । स्वास्थ्य चौकी, बिजुली जस्ता विकासको आधारभूत पूर्वाधार छैन । यसको विकासमा लाग्नेछु । नगरपालिकामा रोजगारी सृजना गर्नेछु । पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्नेछु ।
सिलगढी नगरले महिला मेयर पाएको छ । अब महिलाहरुले कस्तो राहत पाउँलान् ?
– महिलाको विकासका लागि मैले ठोस योजना बनाएको छु । अझैपनि महिलाहरु शिक्षाबाट बञ्चित छन् उनीहरुलाई शिक्षा तर्फ उन्मुख गर्नेछु । महिलाहरु हिंसामा परेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसा न्युनिकरण गर्नेछु । महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम ल्याउने छु । महिलालाई आयआर्जन तर्फ उन्मुख गर्नेछु ।